Suleymaan Maxamed Maxamuud, xeer-ilaaliyaha guud ee Qaranka
MUQDISHO, Soomaaliya – Dowladda Soomaaliya ayaa ka jawaabtey eedeynta ka timid Madasha Xisbiyada Qaran oo ahayd in gaari boolis ah uu rasaas ku furay xaruntooda ahna hoyga Shariif Sheekh Axmed.
Shalay ayay ahayd markii ay soo ifbaxday dhacdadaas. Madasha waxay soo bandhigtay sawirro ay ku caddeyneyso sheegashada.
War-saxaafadeedka ayay ku sheegeen in gaariga ka dambeeyay falkaas uu lahaa Suleymaan Maxamed Maxamuud, xeer-ilaaliyaha guud ee Qaranka, kaasoo durba ka jawaabay warka kasoo yeeray madasha.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ah ee bartiisa Facebook ayuu ku xaqiijiyey in gaariga rasaasta furay ay ilaaladiisu la socdeen.
"Gaariga la sheegay in uu xaabad huwiyay ilaalada Madaxdwaynihii hore Mudane Sheekh Shariif, waa gaari Police ah oo ilaaladayda saarnaynd," ayuu yiri, wallow uusan caddeyn hadii uu la socday gaariga.
Balse, wuxuu meesha ka saarey "si bareer ah" loo furay rasaasta, taas oo kamid ahayd eedeynta xisbiyadda mucaaradka.
"Labo gaari oo yaryar oo wadada ku sheekaysanayay wadadana xirtay kadibna gaarigii Police sanka u soo galiyay gawaaridooda ayaa keentay halka xabo ee dhacday," ayuu raaciyey hadalkiisa.
Isagoo hadalkiisa sii wata, wuxuu meesha ka saarey in uu sidoo kale jiray weerar ka dhan ah hoyga madaxweynihii hore ee Soomaaliya.
"Waxaa caddaynayaa wax intaas ka wayn in aysan jirinin cid weerartay ilaalada Madaxwayne Sheekh Shariifna aysan jirinin," ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay xeer-ilaaliyaha guud ee Qaranka Soomaaliya.
Dhacdadaan ayaa soo ifbaxeysa iyaddoo dhowaan xukuumadda fedraalka ay iska fogeysay eedeymo ku saabsan ciidamo dul-dhigtay hoyga Shariif isla markaana ay qorsheysay weeraro lagu bartilmaameedsado gurigiisa.
Midowga Yurub iyo Madasha Xisbiyada oo afar qodob ka shiray
Soomaliya 05.04.2020. 17:30
Kulankaan ayaa kusoo aadaya xili ay madasha dhowaan ka digtay muddo kororsi.
Warqad ka dhan ah hay'adda NISA oo loo diray madaxda DF Soomaaliya
Soomaliya 29.04.2020. 02:35
Sheekh Shariif oo digniin u diray madaxda Dowladda Soomaaliya
Soomaliya 05.04.2020. 20:42
Madasha Xisbiyada Qaran oo baaq iyo digniin kasoo saartey deyn cafinta
Soomaliya 31.03.2020. 11:05
Shariif oo fariin u diray hogaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya
Soomaliya 07.04.2020. 08:45
Dhageysiga dacwadii xisbiga Shariif ka gudbiyey DF oo bilaabaneysa
Soomaliya 11.11.2019. 19:51
Madasha Xisbiyada oo cambaareysay talaabooyin ay wado DF
Soomaliya 24.03.2020. 17:30